Anontanio izao famerenana - Famakiana psychic an-tserasera
Hevitra misimisy kokoa amin'ny Internet > Mangataha fijery ankehitriny
Fanontaniana feno amin'ny AskNow
Asknow dia tambajotra psychic mampihoron-koditra ary mampiasa ny sasany amin'ireo mpamaky karatra psychic sy tarot tsara indrindra ao amin'ny firenena. Ny Ask Now no hany tambajotra nodinihinay izay nanolotra famakiana amin'ny teny Espaniôla ary koa Anglisy. Azon'izy ireo antoka fa ho afa-po amin'ny famakiana ara-tsaina ianao fa manome antoka 100% hamerenana vola. Raha tsy afa-po ianao dia mifandraisa fotsiny amin'ny ekipa mpanohana ny mpanjifa dia hamerina ny volanao izy ireo, tsy misy fanontaniana apetraka. Mampiasa aho Asknow matetika ho an'ny torohevitra, ary hitako fa ny vidin'izy ireo no tsara indrindra sy tsara indrindra amin'ny ankapobeny.
Asknow efa niasa nandritra ny taona maro ary iray amin'ireo serivisy Psychic voalohany nanomboka nanolotra serivisy an-tserasera. Amin'izao fotoana izao dia tompon'ny orinasa sy miasa any Florida izy ireo mba hahafahanao mahazo antoka fa mahazo orinasa azonao itokisana, fa tsy orinasa any ivelany. Avo ny fahafaham-pon'ny mpanjifa ary nohavaozin'izy ireo vao haingana ny rafitr'izy ireo hahafahanao miresaka amin'ny mpanolotsaina tadiavinao, na dia tsy eo noho eo aza izy ireo. Ampidiro ny nomeraon-telefaonanao ary hiantso anao ny rafitra raha vantany vao misy izy ireo. Manolotra tombontsoa kely maro izy ireo izay tsy tian'ny serivisy psychic hafa ny horoscope maimaim-poana, ary ny famakiana chat amin'ny Internet.
AsknowMahafinaritra ny fizahana fizahana ny psychika. Psychika 1 amin'ny 10 no mihatra no karamaina. Ny psykika vaovao izay mihatra dia omena dinidinika maromaro ary avy eo hosedraina ny fahaizany ara-tsaina. Entanina ny psychics hampifaly ny mpanjifa, ary raha be taraina izy ireo Asknow tsy hamela azy ireo hamaky intsony.
Vao haingana Asknow nohavaozina ny tranonkalany ary mila milaza aho fa mbola tsara lavitra noho ny teo aloha. Nanampy fiasa vaovao antsoina hoe "call back" izay tena tiako izy ireo. Andao lazaina fa ny psychic tianao indrindra dia an-tserasera fa tsy misy. Azonao atao ny mametraka ny nomeraon-telefaoninao ary hiantso anao avy hatrany ilay psychic raha vantany vao misy izy ireo. Azo antoka ny pao miandry ny aiko am-panahy. Ny tranonkala vaovao dia mora ampiasaina, haingana ary tena manampy anao hahita psychic tsara.
Asknow manana fifanarahana lehibe ho an'ny mpanjifa vaovao. Makà 15 minitra amin'ny $ 10 fotsiny. Manolotra famakiana mailaka maimaimpoana ao amin'ny tranokala ihany koa izy ireo, na dia maharitra andro vitsivitsy monja aza vao hahazo valiny dia tsara izany. Manoro hevitra anao aho hisoratra anarana amin'ny bilaogin'izy ireo isan-kerinandro ho an'ny tapakila ary horoscope tena mahatalanjona.
AsknowTsara ny ekipan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Manana antoka famerenam-bola izy ireo ka raha tsy afa-po ianao dia afaka mangataka famerenam-bola. Tsy manome nomeraon-telefaona mpanohana mpanjifa izay mahadiso fanantenana izy ireo, saingy ny ekipa mpanohana mailaka azy ireo dia namaly ny olako tao anatin'ny minitra vitsy monja ary afaka namaha ny olako haingana foana izy ireo.